Discount ho an'ny mpianatra azo henoina (2020) - 30 andro fidirana malalaka - Tolotra
Milaza ny olona fa ny taom-pianaranao no fotoana mety indrindra amin'ny fiainanao. Saingy, tsy fantany firy ny tolona ataon'ny mpianatra sasany ary aleon'izy ireo miala ny ampahany sahiranao ary manangona ny dolara tsirairay ho an'ny boky fianarana, sakafo ary fitsangatsanganana.
Ny vola dia tery foana rehefa mpianatra ianao ary mbola tsy mahaleo tena, ary mety ho sarotra tokoa ny fihenjanana ara-bola rehefa tsapanao fa tena ilaina ny mijanona eo an-tampon'ny fianaranao.
Raha misy zavatra tsara amin'ny vanim-potoana ankehitriny dia fihenam-bidy ho an'ny mpianatra izany. Betsaka amin'ireo orinasa no manolotra ny vokatra sy serivisiny amin'ny fihenam-bidy ho an'ireo izay sahirana mandritra ny taona maro tamin'ny fianarany teny amin'ny oniversite tamin'ny lahateny, fanoratana, fikarohana ary fianarana nandritra ny taona faramparany. Tsy dia mora loatra ny maha-mpianatra.
Azo henoina: Fampahalalana fohy sy fampidirana
Ny Audible dia fomba iray mihaino ny boky misy ny safidiny ho isam-bolana ary ny fomba nanovan'ny audiobooks ny foto-kevitry ny famakiana dia mitsoka fotsiny.
Rehefa misoratra anarana amin'ny Audible ianao dia afaka mahazo boky mihoatra ny 200000 hisafidianana ary fomba tsara koa io fihainoana ireo tantara tianao indrindra ary azonao atao koa ny mizara izany zavatra izany amin'ny namanao na fianakavianao, izay tena milay .
Ny vokatra Audible rehetra dia alaina sy voatahiry ao amin'ny Audible Library anao, izay ahafahanao mandeha amin'ny fotoana rehetra ary mihaino na mamerina misintona izany isaky ny mila izany.Ny vokatra rehetra dia azo henoina amin'ny maody an-tserasera ary koa amin'ny maody ivelan'ny Internet na amin'ny maody fandosiran'ny fitaovana koa ary ny boky rehetra dia azo takalo amin'ny iray hafa amin'ny fotoana rehetra.
Azonao atao ny misintona ny fampiharana mivantana amin'ny findainao finday na mampiasa azy amin'ny solosaina findainao koa.Azonao atao ny mihaino ny tantara tianao indrindra amin'ny fotoana rehetra, any an-trano, any amin'ny oniversite, any amin'ny valan-javaboary na amin'ny gym. Ampidiro fotsiny ny sofinao ary raiso ny tantara tianao indrindra.
Raha mpianatra tia mamaky boky na mihaino audiobook fotsiny ianao dia tena te-hanararaotra ny fihenam-bidy omen'ny mpianatra azo avy amin'ny Audible.Audible amin'izao fotoana izao dia manana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra manokana ahafahanao mahazo hatramin'ny 30% ary koa $ 10 Amazon credit rehefa misoratra anarana.
Ny drafitry ny mpikambana ho mpikambana dia fihenam-bidy tsotra fotsiny amin'ny maha-mpikambana Audible mahazatra anao izay hahazoanao ireo endrika mitovy amin'ny Audible.Ity tolotra fihenam-bidy ity dia natao ho an'ireo mpikambana vaovao izay mbola tsy nanao sonia kaonty Audible.Ary koa, mandritra ny fotoana voafetra dia afaka mahazo audiobooks 3 ny mpianatra amin'ny $ 3.00 fotsiny - izany hoe manodidina ny $ 1 ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
Hamarino ny tolotra mpianatra hafa-
Fihenan'ny mpianatra Netflix?
Ianao dia mila Kitiho eto .
Midira fotsiny na misoratra anarana amin'ny kaontinao UNiDAYS hanamarinana ny fahazoana mihena ny fihenan'ny mpianatra.
Hahazo mpikambana $ 9.95 isam-bolana ianao mandritra ny 2 volana
Tsy maintsy manamafy ny satan'ny mpianatra ianao ary manavao ny maha-mpikambana anao alohan'ny tsingerintaona iray taonanao amin'ny Audible. Raha tsy manamafy ny satananao sy / na tsy mpianatra mahay intsony ianao dia havaozina ny famandrihana arakaraka ny vidin'ny mpikambana Audible Gold mahazatra. (Azonao atao ny manafoana amin'ny fotoana rehetra)
Afaka mahazo ny tahan'ny mpianatra mihena mandritra ny 4 taona ianao ary amin'ny faran'ny taona fahefatra, ny mpikambana ao amin'ny Audible dia havaozina ho mpikambana isam-bolana Audible Gold isam-bolana
Tombontsoa amin'ny maha-mpikambana maheno azy amin'ny fampihenana ny fihenan'ny mpianatra:
Ny haino aman-jery dia mety ho fomba tsara hanampiana ny fahazarana mindrana trano famakiam-boky, indrindra raha $ 10 isam-bolana ny vidin'ny fihenan'ny mpianatra. (Toa tsara, marina?) Izany dia $ 5 latsaky ny maha-mpikambana mahazatra anao ary mahazo ny tombony rehetra azonao amin'ny maha-mpikambana volamena anao ianao -
Mahazo trosa iray isam-bolana ianao hampiasana amin'ny lohateny misy ao amin'ny tranomboky Audible- miampy roa Audible Originals maimaim-poana.
Ity orinasa ity koa dia manana varotra isan'andro sy fivarotana boky tsy tapaka izay tsy misy ho an'ny mpikambana ao aminy, ka matetika ianao dia afaka mahazo lohanteny roa amin'ny vidin'ny iray na amin'ny $ 2 ambany fotsiny.
Fihainoana raki-peo Audible maimaim-poana, maimaim-poana ary maimaim-poana. Azonao atao ny misintona betsaka araka izay tianao nefa tsy misy sarany miafina fanampiny!
Raha indray andro any na manafoana ny maha-mpikambana anao ianao, ny audiobook rehetra ao amin'ny tranomboky Audible anao dia anao irery ary ny anao irery ihany no mitazona izany.
Mahazo ny ankamaroan'ny audiobooks safidinao isam-bolana ianao, na inona na inona vidiny.
Azonao atao koa ny miovaova ny audiobooks anao maimaim-poana raha tsy tianao izany.
Na te hihaino boky mila famakiana ianao na hiditra amin'ny tontolo hafa momba ny Novels tianao indrindra, Audible dia manana lohateny an'arivony ho anao.
Ny fihainoana dia tsy ny fihainoana ireo boky foronina fotsiny, fa ny ankamaroan'ny mpianatra dia afaka mampiasa azy io ihany koa mba hahatratra vaovao mifandraika amin'ny fandalinany. Audible dia manome anao vidiny voafaritra isaky ny audiobook azonao vidiana raha tianao, tsy misy fifanarahana na adidy mitohy.
Ny maha-mpikambana maha-Audible anao dia manome anao 30 isan-jato, na $ 9.95 isam-bolana fotsiny. Miaraka amin'izany, misy lohateny telo isam-bolana izy io, ny iray dia audiobook sy Audible Originals roa ary koa fampihetseham-peo tarihin-peo. Mahazo $ 10 fampiroboroboana $ 10 Amazon.com ihany koa ianao rehefa misoratra anarana amin'ny Audible.
Tsy mila mitondra boky fanampiny sy mavesatra ianao amin'izay alehanao izao, afaka mampiasa Audible fotsiny ianao ary mitondra ny bokinao amin'ny findainao, takelaka na solosainao finday amin'izay alehanao.
Sintomy fotsiny ny fampiharana amin'ny fitaovana tianao indrindra ary manomboka mihaino ireo audiobooks. Ary, raha vao misintona audiobook ianao dia tsy mila mifandray amin'ny Wi-Fi vao hihaino. Noho izany, azonao atao ny mankafy mihaino na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra na dia ivelan'ny Internet aza ianao.
Manomboka amin'ny fisedrana maimaim-poana mandritra ny 30 andro ny famandrihana, amin'izay ianao afaka manandrana Audible alohan'ny ividiananao azy!Ary koa, raha mikasa ny hanafoana ny mpikambana ianao amin'ny daty manaraka, dia azo atao sy mora koa izany. Raha ny marina dia mora ny fandraisana mpikambana maheno karama isam-bolana ary fanapahan-kevitra mety ho an'ny mpianatra maro.
ao afovoan'ny ranomasina 123movies
ohatrinona dia crunchyroll Premium mpikambana
minecraft maimaim-poana hilalao tsy misintona
dia azo omena varavarankely imovie
tranokala tsara indrindra hijerena serial serial hindi online